तपाईं गालापागोस टापुहरू थिए भने, तपाईं पक्कै पनि समुद्री Iguana भेटे। यो जनावर को फोटो intimidating देखिन्छ, तर यो एक विशेष बीहड सौन्दर्य बिना छैन। समुद्री iguanas प्रकारको पहिले वर्ष लाखौं बस्नुहुन्थ्यो डायनासोर सम्झाउने छन्। त्यो जनावर विशेष ध्यान यस लेखमा चाहनुहुन्छ के।
यस समुद्री Iguana कसरी
गालापागोस यात्री बेल foamy सर्फ, सेतो बालुवा र कालो basalt बवासीर को विचित्र संयोजन विस्मित। र एक अद्वितीय प्राणी संसारको कुनै पनि अन्य भाग फेला परेन छ जो यस असाधारण प्राकृतिक सौन्दर्य, बीचमा बसोबास। समुद्री iguanas - यो छेपारो को एक विशेष प्रकारको छ। ठूलो बलियो खुट्टा, लामो नंग्रा र formidable तेज सिङ कोर्नु यो ठोस पशु। लघु प्रागैतिहासिक डायनासोर को एक प्रकारको, गल्ति हाम्रो दिन संरक्षित। reptilian शरीर पत्र को एक बाक्लो तह ढाकिएको छ। व्यापक टाउको सुरक्षा spiked टोप सजाया।
समुद्री iguanas लामो पुच्छर को टिप गर्न बख्तरबंद। Caudal ठूलो, quadrangular मात्रा। यो transverse पङ्क्तिहरू संग लाइन छ, तर यात्रा समयमा सार्न जनावर गरेको पुच्छर हस्तक्षेप गर्दैन। Sam पुच्छर laterally चपटे। ठूलो समुद्री इगुवाना, जो डेढ मिटर लम्बाइ आयाम, समुद्र मा धेरै समय बिताउनुभयो। छेपारो वयस्क 10-12 किलो वजन।
जनावर को पछाडि शिखा धेरै menacing देखिन्छ। त्रिकोणात्मक, अलिकति लम्बी आकार मा छाला गुच्छे। खुट्टा, यद्यपि पर्याप्त धेरै, शक्तिशाली छोटो देखिन्छ। को औंलाहरु फ्लोट गर्न मद्दत गर्छ जो एक झिल्ली संग प्रदान गरिन्छ। समुद्री iguanas, खैरो खैरो वा greenish- मा चित्रित खैरो रंग।
Iguanas तिनीहरूले पौडी खेल्न र धेरै राम्रो तरिकाले डुबुल्की मार्न कसरी थाहा, तीव्र दृष्टि छ। भूमि तिनीहरूले शत्रुहरूलाई छैन, त्यसैले तिनीहरू ढिलो र अल्छी हुन किन्न सक्छन्। तर पानी मा अक्सर शार्क देखि भाग्न, त्यसैले यहाँ धीमा घातक हुन सक्छ छ। त्यसैले समुद्री Iguana बानी स्थित छ जसमा वातावरण आधारमा समायोजित।
भूमि मा मनपर्ने गतिविधि छेपारो - सूर्य आनन्द उठाउँछन्। यो thermoregulatory पशु कारण हो। यसको शरीर तापमान वातावरण मा निर्भर गर्दछ, र प्रक्रियाको सामान्य कामकाज लागि पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त गर्न, यो गर्मी जम्मा गर्न र शरीर भर यसलाई वितरण गर्न आवश्यक छ। यस समुद्री Iguana को तात्दै धम्की छैन। यो पेट को छाला मार्फत अतिरिक्त गर्मी आवंटन।
डार्विन समुद्री iguanas भनिन्छ शैतानको incarnate, त्यसैले भयानक उहाँलाई यी छेपारो को उपस्थिति देखिन्थ्यो छ। तर वास्तवमा तिनीहरूले पनि आक्रामक छन्। समुद्री iguanas जीवन परिवार समूहहरू, जो एक वयस्क पुरुष र दस महिलाहरुको समावेश सिर्जना गर्नुहोस्। Juveniles अलग आयोजित गर्दै छन्, तर पनि सानो समूह बन्द प्राप्त। सँगै एक ठूलो समुदायमा कहिलेकाहीं धेरै परिवार।
प्रत्येक पुरुष यसको आफ्नै क्षेत्रमा पछि देखिन्छ। पृथ्वीको "परिवार" मा विदेशी व्यक्तिहरूलाई अनुमति छैन। पराई देखेर पुरुष trespassing विरुद्ध चेतावनी दिन्छ। यो एक स्थिर स्थिति लिन्छ र उनको टाउको हल्लाउनु गर्न थाल्छ। यदि offender हटाइएको छैन, त्यसपछि लडाई सुरु हुन्छ। सामान्यतया अपरिचित लडाई गम्भीर सञ्चालन ताकि, एक व्यस्त क्षेत्रमा आउँछन् "मालिक" अन्त: पुर को दृश्य।
पानी मा व्यवहार
समुद्री iguanas शायद किनारमा टाढा सेल। पानी मा, तिनीहरूले undulating तेर्सो आन्दोलन बनाउन। पशु लागि आनन्द, तर खाना वा शार्क देखि escaping लागि डुबुल्की मार्न छैन। पुरुषहरु साहसी र बलियो iguanas, तिनीहरूले महिलाहरुको भन्दा लामो पौडनु किन्न सक्छन्। युवा जनावर सधैं खोक्रो पानी मा राखिन्छ।
अरू के समुद्री Iguana चकित गर्न सक्षम छ? यी पशुहरू को परिसंचरण सम्बन्धित रोचक तथ्य वैज्ञानिकहरूले संकलन गरेका छन्। सतह गर्न उदाउँदैन र पानी मा अक्सिजन बचत गर्दा अक्सर अतिरिक्त ऊर्जा खपत छैन, सरीसृप। रक्त तल, मात्र अत्यावश्यक अङ्गहरू आपूर्ति रगत slows। यसरी, छेपारो 1 घण्टा भन्दा बढी पानी अन्तर्गत बच्न सक्नुहुन्छ।
निस्सन्देह, यो समुद्री Iguana धेरै प्रभावशाली र डरलाग्दो देखिन्छ, तर यो एक predator छैन। समुद्री iguanas को herbivorous सरीसृप हौं। तिनीहरूले ज्यादातर खान शैवाल। यो डुबुल्की मार्न गर्न सिकेका यी iguanas लागि हो। तटीय चट्टानहरु, छेपारो वरिपरि शैवाल मोड र केही प्रकार ध्यान तिनीहरूलाई बेकारी।
विवाहपूर्वको पुरुष iguanas एक मनपर्ने सोख छैन। आफ्नो अन्त: पुर गर्न आकर्षण उहाँले मात्र एक वर्ष एक पटक अनुभव। यो समयमा, पुरुष को तराजू मा सक्रिय महिलाहरुको आकर्षित कि खैरो र रातो स्थलहरू देखा उज्जवल बन्नेछ।
को fertilized महिला छेद केही अन्डा कर्तुतहरूलाई उदाङ्ग पार्छ। 2-3 टुक्रा - उनको सानो बिछाउने। आफ्नो धन महिला माथि न्यानो बालुवा छिडकना। गैलापागोस बिट मा बलौटे क्षेत्रमा, मुख्य द्वीप मा ज्वालामुखी चट्टान बनेको हुनाले चिनाई झगडे वरिपरि स्थानहरू अक्सर आउँदैन। कहिलेकाहीं महिलाहरुको आफ्नो progeny लागि कोठा बनाउन प्रतिद्वन्द्वी नष्ट बिछाउने।
न्यानो बालुवा अन्डा बारे चार महिनाको लागि पकाना। त्यसपछि त्यहाँ एउटा अभिभावक समूह संलग्न छ, जवान छ। युवा जनावर मा आहार मात्र होइन बोट तर पनि पशु खाना छ। यो शिशुलाई को विकास को लागि आवश्यक छ।
समुद्री iguanas शायद आमाबाबुले हेरचाह छ। तिनीहरूले सिकारीहरूबाट आफ्नो सन्तानलाई रक्षा छैन। जवान फल्स को धेरै seagulls, साँप वा कुकुर र बिरालोहरु गर्न शिकार। मान्छे समुद्री iguanas को जनसंख्या राख्न आवारा कुकुर खतम गर्नु प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ, तर यो मदत गर्दैन। दुर्भाग्यवश, यी पशुहरू छन् आज रूपमा कमजोर प्रजाति वर्गीकृत।
जीवन मिलाइएको बारेमा केहि शब्द
स्नान वा भोजन समयमा नुन पानी निरन्तर सम्पर्क समुद्री छेपारो को नुन देखि यसको अतिरिक्त हटाउनु विशेष ग्रन्थीहरूको विकास गरे। यी नुन ग्रन्थीहरूको को nostrils छेपारो जडान भएका छन्।
सोल sneezing समयमा बाहिर गुजर। किनभने आफ्नो अन्तस्करणले अतिरिक्त नुन सामना छैन प्रकृति यी ग्रन्थीहरूको सृष्टिको हेरचाह गरिएको छैन भने, त्यसपछि छेपारो को जीवन धेरै कम हुनेछ। तर, प्राकृतिक निवास को प्रकार मात्र गालापागोस द्वारा सीमित छ भन्ने तथ्यलाई गर्न, यो राम्रो बुझेका छैन। त्यहाँ बस्ने यी छेपारो को समय बारे सही जानकारी।
विश्व जलजीवालय माछा: माछा चक्कु
अड्डा रूस र संसारमा सबै भन्दा ठूलो छ। यस अड्डा को संरचना र व्यवहार को सुविधाहरू
Vacuole - यो गुहा सेल रुखको रस भरिएको छ
कर्करमा अनलोडिङ दिनहरू छुटकाराबाट छुटकारा पाउन
मस्तिष्क लागि हृदय लागूपदार्थ। नवीनतम हृदय लागूपदार्थ
एक ब्रेक संग Eyebrows - जो तपाईं आवश्यक फारम? एक ब्रेक संग eyebrows कसरी बनाउने?